Great kanaalada YouTube Waxbarashada talinaysaa and Download Edu Videos
> Resource > YouTube > Sida loo Download Videos ka YouTube Waxbarashada kanaalada
Tan iyo markii la aasaasay, YouTube ayaa qabsaday muhiim ah oo ku saabsan suuqyada diirada u wareegsan. Website No kale waxa ay awood u wax xajin sida isla heerka dareenka iyo si faahfaahsan in YouTube siisaa, iyadoo aan la tilmaamaynin lacagta kara samaynta kartidooda. YouTube inoo siiya si maktabad quruxsan cajiib ah videos - qaar ka mid ah in ka nixin doonaa, qaar ka mid ah in ka dhigi doonaa nagu qososho, iyo qaar ka mid ah na siin doonaa warbixin qiimo leh.
Videos waxbarashada on YouTube waa cajiib, oo waxaa jira wax badan oo channels YouTube dhigay ilaa si toos ah oo ku saabsan noocan ah ee shaqada. Haddii aad raadinayso in ay isticmaalaan YouTube in wax yar ka badan ballaariyo jahooyinka aad, ka dibna waxaan ku talinaynaa in aad baadhid, kuwaas oo shan kanaal cajiib Waxbarashada YouTube.
Qeybta 1: Top 5 YouTube channels waxbarasho
Qeybta 2: Sida loo soo dejisan oo dhan videos ka YouTube channels waxbarasho
Halkan waa 5 liiska ugu sareeya ee YouTube channels waxbarasho.
SciShow gareeya ay mar eegayaan kala duwan oo badan oo kala duwan oo ka fikradaha la soo dhaafay iyo hadiyad. Isticmaalka khibradooda, ay isku dayaan in ay debunk ama xoojin sheekooyin iyo warka belefta ah sanadihii la soo dhaafay in ay isku dayaan oo ogaan qaar ka mid ah xaqiiqooyinka si dhab ah u fiican. Kuwaaso mudan ka eegno!
Ted-Ed wuxuu ka kooban yahay kooxo badan oo khubaro iyo fikrado kala duwan. Ka qayb qaatay by maankiinna badan caaqil, waxaa jira videos todobaadle ah la sii daayay, gaar ahaan dhinaca isbuucaan. Tani waa meel fiican oo si uun u ogaato qaar ka mid ah fikradaha runtii xiiso leh iyo aragtiyaha, iyadoo qaar ka mid ah animation laga cabsado wuxuu iyaga gadaal.
Channel wuxuu isku dayayaa inuu na siiso oo dhan qadarinta sida physics qabow waa dhab. Waxay isku dayaan inay si fiican loo fahmo sida ugu wanaagsan si ay u fahmaan iyo naftaada dhexgalaan la physics. Waa qalab waxbarasho oo cajiib ah, laakiin sidoo kale si siman qabow si ay u arkaan waxyaalaha ay isku dayaan oo ay ugala hadlaan!
CrashCourse daboolayaa lix ka mid ah maadooyinka badanaa la baray - History, Biology, Suugaanta, Ecology, Chemistry iyo Taariikhda Maraykan. Kuwan oo dhan waa maadooyinka weyn sidaa darteed haddii aad ayaa ku dhibtooneysa ee waxbarashada oo u baahan waxoogaa caawimo, taasi meel ay u bilaabaan waa!
Suugaan, channel waxa uu leeyahay xad-dhaaf ah oo ku saabsan tirada videos. Wax kasta oo lagu qaban lahaa tirada, waxaa si fudud yahay baaxadda wax badan oo ku saabsan channel in isku dayaya in ay soo koobo ama sharax fikrad ka danbeeya waa adag tahay. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku lug leedahay xisaabta ee waxan oo dhan waa channel weyn ay u fiiriyaan.
Hadda, dhibaatada la hubin oo dhan oo ka mid ah liiska weyn iyo Casharrada ayaa isku dayaya in ay dhammaan u arkaan mar kasta oo aad rabto. Ka dib oo dhan, qaar ka mid ah wax this tixraaca iyo cilmi baaris dhab ah oo dahab ah, sax? Sidaas hubaal aad rabto in ay helaan in ay mar walba? Waa hagaag, la inoo yahay caawimaad, aad awoodo. Halkan waa hab lagu soo dejisan oo dhan videos ka YouTube channels waxbarasho si aad u daawato, xitaa marka aanad haysan internet.
1. Download wax videos YouTube iyo playlists si fudud oo dhakhso ah
3. Download videos ka dheeraad ah 100 video goobaha sida Break, vimeo, iyo kuwa kale
Sida loo isticmaalo Wondershare AllMyTube soo bixi YouTube waxbarasho videos la mid click
Download barnaamijkan ka kor ku xusan link oo ka fikiraan in ay jiraan laba nooc. Burcad barnaamijka si aad u hesho diyaar.
Marka aad ka heli YouTube waxbarasho videos, iyaga guji inuu u ciyaaro. Waxaa jiri doona a Download go, a lahayn button. Riix badhanka iyo aad u hesho video ka soo bixi. Waxa kale oo aad nuqul ka kartaa url video ka browser ee cinwaanka bar iyo riix URL paste button on furmo suuqa hoose.
Tallaabada 3. badalo videos in qaabab kale (optional)
Tag ay ku dhameysatay kaalinta maktabadda si aad u hesho videos ah. Riix Beddelaan oo Midigta iyo doortaan qaab. Riix Ok inuu ku soo bilowdo diinta. Markaas waxaad ku wareejin karaa videos ay ku ciyaaraan ee qalabka la qaadi karo adiga oo aan wax dhibaato ah qaab incompatibility.